PressReader - Isolezwe: 2018-07-12 - Igcagcele esokeni kothisha bakwaGrade R
Igcagcele esokeni kothisha bakwaGrade R
Isolezwe - 2018-07-12 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE
BAZOHLEKA bodwa othisha bakwaGrade R KwaZuluNatal njengoba uMnyango wezeMfundo uthembise ukuthi bazoyithola kule nyanga imali yabo esinochatha.
UMnuz Nathi Ngcobo, isikhulu esibhekele ukuqasha emnyangweni, uthe le mali bazoyithola kule nyanga ikhokhwa kusuka ngoEphreli kulo nyaka.
Uthe abakwazanga ukuyikhokha kusuka ku-Ephreli wonyaka odlule ngenxa yokungabinayo imali.
“Sisebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi ekupheleni kukaJulayi bayayithola imali yabo, nemali esibakweleta yona kusuka ngoEphreli. Uhlelo luthe ukudonsa ngoba besinenkinga yemali ebekumele siyilungise kodwa nakwisabelo sezimali somnyango, uNgqongqoshe walo Mnyango (uMnuz Mthandeni Dlungwane), wazibophezela ekutheni izonyuswa imali yalabo thisha,” kusho uNgcobo. Uthe basebenzisana nomnyango kamgcinimafa ukuze bakwazi ukubakhokhela bonke ngesikhathi. “Uma singase sithi sizokwenza umuntu nomuntu kungathatha eside isikhathi kungaze kushaye uDisemba abanye bengayitholile imali. Yingakho sifuna ukuthi bonke bayithole ngesikhathi esisodwa le mali,” kuqhuba uNgcobo. Kuzokhumbuleka ukuthi kusuka nyakenye labo thisha nezinyunyana zilwa nomnyango zifuna ukuthi zenyuselwe imali.
Nyakenye abazange banyuselwe umholo, abazange bathole namabhonasi ngoDisemba.
Bangaphezulu kuka 5 000 othisha bakwaGrade R kulesi sifundazwe, umnyango wathi labo abaneziqu bazokhushulelwa amaholo ngo R1 250 kuthi labo ababengenazo banyuselwe ngo R750.
UNgcobo uthe uGrade R ubaluleke kakhulu njengoba kuyibona abacathulisa abafundi abasuke bezoqala ukufunda.
“Phambilini othisha bakwaGrade R babekhokhelwa abazali. Uhulumeni wabe esengenelela ngemuva kokuba izikole eziningi sezingakhokhisi imali yesikole okwadinga ukuthi kube uhulumeni ozobabhekelela,” kusho uNgcobo.
UMnuz Allen Thompson, iPhini likaMengameli weNatu, uthe bafuna othisha bakhokhelwe umholo kusuka ngo-Ephreli wonyaka odlule, hhayi lo nyaka.
Uthe abakwazi ukuthi bangasebenza bese begcina bengakhokhelwa imali yonyaka odlule.
“Luselude ukuphela udaba lothisha bakwaGrade R ngoba sizolwa sifuna le mali . Akukwazi ukuthi bonke abasebenzi bahulumeni bethola imali bese bona benganikwa banikwe eyezinyanga ezimbalwa.”
UNobhala weSadtu uNksz Nomarashiya Caluza, uthe bazolinda umnyango uze ukhokhe ngoba awuthembekile njengoba nasekuqaleni wathembisa kodwa wangenza.
Uthe bazoqhubeka balwe nokuthi bakhokhelwe imali yangonyaka odlule.
Isithombe: MHLENGI SHANGASE
UMNUZ Nathi Ngcobo obhekele ukuqashwa eMnyangweni wezeMfundo KwaZulu-Natal ongakwesokudla othembise ukuthi bazowuthola kule nyanga uchatha othisha bakwaGrade R. Uthathwe noMnuz Vukani Khumalo wakulo mnyango